बच्चालाई माटोमा किन खेल्न दिने ? माटोमा के पाइन्छ ? – eSajha News
प्रकाशित मिति: २४ जेष्ठ २०७७, शनिबार १०:४९
त्यही कारण उनीहरु आफ्ना बालबच्चालाई घरको चौघेरामा, कोठामा राख्छन् । घरभन्दा बाहिर जाने अनुमति दिदैनन् । घर बाहिर गएमा माटोमा खेल्छन्, पानीमा खेल्छन् । लड्न सक्छ, मैला लाग्न सक्छ । बरु घरभित्र भएमा उनीहरु सुरक्षित हुन्छन् । फोहोर(मैला लाग्दैन । लुगाफाटो धुने झन्झट हुँदैन ।
त्यसैले बच्चालाई माटो, पानीबाट विच्छेद गर्ने होइन । बरु माटोमा खेल्न दिनुपर्छ ।शहरिया बालबच्चा र गाउँघरका बालबच्चालाई तुलना गरेर हेर्नुहोस् त । गाउँघरमा हुर्किएका बच्चाहरु माटो खेल्छन्, पानी खेल्छन्, रुखमा चढ्छन्, गाईबाख्राको सम्पर्कमा पुग्छन् । भलै उनीहरुको लुगाफाटो मैला होला । पानी खेलेर बेलाबखत रुघाखोकीले सताउन सक्ला । तर, यस्ता रोगहरु विस्तारै पचाउँदै जान्छन् ।
माटोमा के पाइन्छ रु
मन्टेश्वरी विधीमा बच्चालाई माटोमा खेल्न दिइन्छ । अर्थात उनीहरुलाई मनलाग्दो खेल्न दिइन्छ । माटोमा उनीहरुले खेलिरहँदा के बनाउँछ रु कस्तो आकृति बनाउँछ रु यसले उनीहरुको मनोविज्ञान पनि झल्कन्छ ।
माटो नै सम्पूर्ण प्रकृतिको आधार हो । हाम्रो शरीर पनि माटोमै मिल्छ । संसारका ति सम्पूर्ण भौतिक कुराहरु अन्ततः माटोमै विलय हुन्छ । यसर्थ माटोसँग हाम्रो जीवन(चक्र गाँसिएको छ ।
२४ जेष्ठ २०७७, शनिबार १०:४९ मा प्रकाशित